बाबुराम भट्टराईका ४ ट्वीटले सामाजिक सञ्जालमा खैलाबैला, ओली प्रचण्ड बने बेजवाफ — sancharkendra.com
काठमाडौं । यतिबेला वाइडबडी अनियमितता प्रकरणबारे सामान्य नागरिक तहदेखि ठूलो राजनीतिक नेतृत्वसम्मको ध्यान तानेको छ । पक्ष र विपक्षमा सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक फोरमसम्म एक प्रकारको बहस पैदा भएको छ ।
‘आफ्नो दिसा सुवासिलो अरूको दिसा गनाउने भन्न मिल्दैन ! त्यस्तै आफ्नो पार्टीले गरेको भ्रष्टाचार राम्रो अर्को पार्टीकाले गरेको नराम्रो भन्ने हुन्न ! आआफ्नो पार्टीको बचाउ गर्ने सुरमा वाइडवडी प्रकरणमा लेखासमितिलाई पंगू बनाउने काम नहोस् ! षडयन्त्रको गन्ध आयो ! भ्रष्टाचार क्यानसर हो, सबैलाई खान्छ !’
‘वाइडवडी प्रकरणमा सरकार किन झन् वाइड खाडलमा खस्दैछर ? महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र संसदको सार्वजनिक लेखासमितिको प्रतिवेदन भन्दा पूर्व न्यायाधीश नेतृत्वको आयोग कसरी ‘उच्च स्तरीय’ हुन्छ ? यो त लम्याउने,थकाउने,भुलाउने,गलाउने ट्याक्टिस मात्र भएन र ? नभुलौं लोकतन्त्रमा जनता सर्वोच्च हुन्छ !’
‘फाटेको जालीले छेकेको,छेके पनि छर्लंगै देखेको’ ! यो जनवादी गीत जस्तै वाइडबडी प्रकरणलाई अब जतिसुकै कुतर्कले ढाकछोप गर्न खोजे पनि छोपिन्न ! सिधै निर्मातासंग नकिनी नक्कली कम्पनी खडा गरेबाटै दालमा कालो देखिएको हो ! त्यसपछि त…नैतिकता हुनेले राजीनामा दिउन् नहुनेहरू गलहत्याइयून् जो मर्जी !’
‘१५ सय घुस खाने खरिदालाई पक्रने अख्तियारको खबर राष्ट्रिय मिडियामा पढेर मक्ख पर्ने१ तर ३३९ वा ६३ ? अर्बको एनसेल,७-९अर्बको बुढीगण्डकी,४-६अर्बको वाइडबडी,कति कति अर्बका पप्पूहरूको भ्रष्टाचारबारे चाहिं कानमा तेल हालेर बस्ने ? वा कोठामा गनगन गर्ने ? धन्य हाम्रो अख्तियार ! धन्य हामी नेपाली !’
बाबुराम भट्टराईको यो ट्वीटले सामाजिक सञ्जालमा खैलाबैला मच्चाएको छ। यतिबेला प्रचण्ड यस प्रकरणका बारेमा केहि बोलेका छैनन् । तर धानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूसहित यो सरकारका मन्त्रीहरु विरुद्ध धेरै षडयन्त्रहरु भइरहेको भन्दै जोगिएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुलाई होस पुर्‍याएर बोल्न र काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहित बहालवाला सचिवहरुलाई दोषी ठहर गरेर लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि ओली गम्भिर देखिएको एक मन्त्रीले बताए । यसरी हचुवाका भरमा उपसमितिले अध्यन गर्ने अनुमान आफूले नगरेको प्रधानमन्त्रीको आशय थियो ।
प्रधानमन्त्रीको भनाइ उधृत गर्दै एक मन्त्रीले भने-अहिले हाम्रोविरुद्ध निकै ठूलो षडयन्त्र भइरहेको छ । कुनै गल्ती नै नगरे पनि कहाँबाट सिध्याउने भनेर केही शक्ति र मान्छे लागेका छन् । कुनै पनि बेला फसाउन सक्छन् त्यसैले बोल्दा, निर्णय गर्दा वा हरक कदम चाल्दा होस् गर्नुस् । केही गल्ती नगरे पनि मान्छेहरु सिध्याउन लागेका छन् ।
वाइडबडी प्रकरणमा मन्त्री रविन्द्र अधिकारी र प्रेमकुमार राईलगायत कतिपय निर्दोष व्यक्तिलाई नियतवश फसाउन खोजिएको प्रधामन्त्रीको संकेत थियो । उनले बोलीमा ढंग नपुग्दा पनि समस्या हुने गरेको भन्दै मन्त्रीहरुलाई कम बोल्नसमेत सुझाएका छन् ।
यता वाइडबडी खरिद प्रकरणको छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदनमा नेकपा सांसदहरुले प्रश्न उठाएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले भने निर्णय लिन सकेन । विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएकोमा सबैको सहमत देखिएपनि पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी र गृहसचिव प्रेम राईलाई गरिएको कारबाही सिफारिसमा नेकपा सांसदहरुले प्रश्न उठाए । राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिएको हुनसक्ने आशंका गरे ।
उपसमितिका संयोजक मात्र होइन, उपसमितिमा रहेका नेकपाकै सांसदहरुले त्यसको खण्डन गरे । छानबिन गर्दा जे देखियो, त्यही लेखेको उनीहरुले बताए । तर, समिति निर्णयमा पुगन सकेन । समितिको प्रतिवेदन संशोधन गर्नुपर्ने नेकपा सांसदको मत थियो । कांग्रेस सांसदहरु पनि त्यसमा सहमत देखिए । तर, संशोधन गर्ने प्रष्ट नभएको भन्दै सभापति भरतकुमार शाहले राय मागे ।
नेकपाका सांसद अमनलाल मोदी र सूर्यपाठकले तीन मन्त्रीलाई एउटै सिफारिस गर्नुपर्ने बताए । साथै अनियमितताको मेन डिजाइनर वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंशाकार भएको भन्दै गृहसचिव राईलाई उकास्नलाई समान कारबाही सिफारिस गरिएको भन्दै सांसद पाठकले असहमति जनाए ।
मन्त्री अधिकारीको राजनीनामा माग
संसदमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री रबिन्द्र अधिकारीको राजीनामा माग भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले अधिकारीको राजीनामा माग गरेको हो।
कांग्रेसकी राष्ट्रियसभाकी सांसद विन्दादेवी आलेले वाइडबडी विमान खरिद कान्डमा मुछिएका मन्त्री अधिकारीलाई तत्काल राजीनामा दिन माग गरेकी हुन्।
शुक्रबार राष्ट्रियसभाको बैठकका विशेष समय लिएर बोल्दै उनले संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा दोषी देखिएका मन्त्री अधिकारीले विमान खरिदमा भएको अनियमिततासम्बन्धी छानबिन कार्यलाई सहज बनाउन पनि तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गरिन्।
उनले ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनसयमितता भएकाे भनिएकाे वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो छानबिन समिति गठन गरेको भन्दै सरकारको पनि चर्को आलोचना गरे।
का‌ंग्रेस सांसद आलेले वाइडबडी विमान खरिदमा संसदीय उपसमितिले दोषी ठहर्‍याएकाहरुलाई तत्काल कारबाही गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
संघीय संसद सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले सो वाइडबडी विमान खरिदमा भएकाे आर्थिक घोटाला प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै मन्त्री अधिकारीलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
यस्तै उता विराटनगर पुगेका नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले वाइडबडी विमान खरिदका दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्।
विराटनगर विमानस्थलमा आज साँझ सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले वाइडबडी विमान खरिद छानबिन संसदीय उपसमितिले कुनै मन्त्रीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रष्ट पारे।
सभापति देउवाले उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन आफूले अध्ययन नगरेको र यस विषयमा विस्तृत केही भन्न नसक्ने उल्लेख गरे। उनले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याका आरोपीलाई पक्राउ गर्न नसक्नु गृह प्रशासनको कमजोरी भएको धारणा व्यक्त गरे।
प्रमाण मेटाएर नै अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप लगाउँदै उनले निर्मलाको परिवारले न्याय नपाएसम्म कांग्रेसले यो मुद्दालाई नछोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।